Zvemagariro Midhiya Nyanzvi mumashure mako! | Martech Zone
Zvemagariro Midhiya Nyanzvi muYadhi yako!
Svondo, October 19, 2008 Svondo, Ndira 13, 2013 Douglas Karr
Zvemagariro midhiya ibhizimusi riri kusimukira izvozvi, kunyangwe nehupfumi hwedu huri mukati. Ndinotenda kune zvikonzero zvitatu zveizvi:
Zvemagariro midhiya inzira inobata iyo inonetsa kunyepera kana kuita hafu yembongoro.
Zvemagariro midhiya isingadhuri svikiro, inoda nguva asi kwete yakawanda inodhura zviwanikwa.
Zvemagariro midhiya ndiyo nzira yekutanga yezvose zviri zviviri kutora (Injini dzekutsvaga dzinochida) uye kuchengetedza (zvichigonesa kutaurirana uye hukama).
Kumukira kwemasocial media kwave kwakakurumbira zvekuti iko zvino kwatanga kuburitsa nyanzvi dzematunhu. Ava vanhu vakashanda mukushambadzira, kushambadzira, uye / kana tekinoroji yepamhepo kwemakore mazhinji, asi ivo vakasvetukira kune vezvenhau nekuti vanoziva kukosha uye kugona. Heano matatu matunhu enharaunda:
Kyle Lacy: Zvemagariro Media, Indianapolis
Muno muIndianapolis, ndanga ndichishanda pamwe chete Kyle Lacy kwegore rekupedzisira kana zvakadaro. Kyle anga achishanda nesimba kuti azvisimbise se ari wedunhu Social Media nyanzvi. Tsvaga Vadivelu Comedy Indianapolis, uye iwe unotowana Kyle akaverengerwa # 1!
Hazvishamise, Kyle ane rudo rusingaperi rweiyo svikiro - iwe uchamuwanira iye 24/7 kuvaka hukama pa Friendfeed, Mudiki Indiana, uye imwe neimwe nzvimbo inogoneka pamambure. Iye anoshanda nevatengi kubva kune ese maindasitiri muno mutaundi uye anotyaira kushingairira kwake kushambadzira kwepamhepo mune yega nzira.
Jason Falls: Yemagariro Media, Louisville
PaMasters achangopfuura eBhizinesi Online, ndakafanirwa kuenda kumusangano waJason Social Media Strategies: Kushambadzira muWebhu 2.0 Nyika. Saiti yaJason Zvemagariro Media Explorer ndeimwe yandave ndichitevera kwenguva yakati. Ndakanga ndichironga kuburukira kuLouisville kwenguva yakati rebei kuti ndione Jason asi chimwe chinhu chaigara chichipinda munzira… Ndiri kufara kwazvo kuti takazosangana!
Ndichiri ini ndakashanda pakushambadzira kwakananga, kushambadzira kwedhatabhesi, uye tekinoroji padivi rekushambadzira kwemakore gumi apfuura, Jason akashanda paruzhinji Rwehukama nerutivi rwekutengesa bhizinesi. Ini ndinonakidzwa nekuverenga bhurogu yake nekuti iwo maonero andisingawanzo kuunza patafura. Ive neshuwa yekuwedzera iyo Zvemagariro Media Explorer feed kune yako kuverenga runyorwa. Mukutaura naJason pachiitiko, ndakakudzwa kuti naiyewo inoverenga blog yangu!
Mike Sansone: Yemagariro Media, Des Moines
Mike anogona kunge ari akanakisa mukomana mumasocial media! Mike neni tave tichiteedzerana mablog mablog emakore akati wandei izvozvi. Yake blog, Shanduko inoisa pfungwa pakushandisa mablogiki kubatsira kutyaira bhizinesi nenharaunda.
Ndiani ari kumashure kwako?
Kuwana yemagariro enhau media nyanzvi kiyi kune rako bhizinesi. Kana iwe ukatarisa pamari yako uye yakawanda yemari yako ndeyemunharaunda, saka unofanirwa kuziva kuti nyanzvi dzematunhu dzakadii. Ivo vanokwanisa kukuzivisa iwe kunetiweki uye kushamwaridzana uko kunotyaira yakawanda traffic kune rako bhizinesi, kukubatsira iwe nenzvimbo yemagariro midhiya nharaunda, uye kutaurirana matunhu zviitiko.
Kana iwe uri mudunhu nyanzvi yemagariro enhau mune rimwe guta kana nyika, inzwa wakasununguka kupindura pano iwe kuti ndiwe ani, uripi, uye zvaunosarudzika. Zvichida inguva yekuti isu titange yedu yedunhu dhairekitori?
Tags: jasoni anowa
Unoita Makomendi Akaenzana Kutendeuka?
Gumiguru 19, 2008 na2: 26 PM
Handizive kana kuri nekuti ndiri wekuCanada kana pamwe nekuti handina kumbobvira ndazvidaidza kuti "nyanzvi yemagariro enhau" zvekuti ndakanetseka kuzvidaidza. Zvichida imhaka yekuti ini handizive kutsanangudza chinonzi "social media expert" chii? Kuverenga Chris Brogan's posvo (http://www.chrisbrogan.com/what-i-want-a-social-media-expert-to-know/) Ndinogona kuzvitsanangura semunhu mumwe. Kuverenga zvimwe zvakatumirwa kubva kuvanhu vawakanyora ini ndinogona kuwira muchikamu ichocho, asi ndinodawo kutarisa kune dzimwe nzvimbo pamwe nemagariro enhau. Zvichida izvo zvinogona kuve yako inotevera kutumira. Chii chinonzi social media nyanzvi?
Gumiguru 20, 2008 pa 8:32 AM
Ini ndinoninipiswa nekudanidzira kunze kwepositi. Ndatenda kwazvo nerupo rwawakandivhenekera mugore rapfuura. Usamurega akunyengere, Doug ndiye mumwe wevatungamiriri vezvematongerwo enyika muMidWest.
LGR: pfungwa yekuve nyanzvi yeMedia nyanzvi yakavhurika zvachose. Ndakagovana pfungwa dzangu pamusoro petsamba (piggybacking off of Brogan). Unogona kuve wekutanga adapta kana geuine anotora.
Gumiguru 20, 2008 na2: 27 PM
Ichi chiitiko chakanakisa, uye chinofanira kutiyeuchidza kuti hatifanirwe kuenda "pasirese," hazvo, kuti tinokanganisa pasocial media. MuAustin, tinotaura nevaridzi vemabhizimusi vemuno nezve zvatakaita pamwe nekuvayambira pane zvinoitwa nemishonga yedu. Muenzaniso wemu-house grasswroots mushandirapamwe yaive Facebook yekutsvaga mushandirapamwe, apo munhu wese muBazaarvoice aive neFB account akasvika kune yavo network panguva imwe chete (isu takawedzera zvinoshamisa kushanya kwenzvimbo uye kuendesa).
Zvikuru kuziva kuti vanhu vari kutaurirana vakatarisana uye nepamhepo!
Gumiguru 21, 2008 na4: 41 PM
Ini ndinoda zano reruwa dhairekitori. Heano mamwe matunhu akanzwika kubva: Miami, FL.
Ini ndinomhanya yeSocial Media / Nyowani Media Kubvunzana iri muMiami inonzi Clearcast Digital Media. Hokore yedu ndeyekuti nekuda kweangu makore 15+ ekuziva semugadziri weTV, isu tinogadzira zvese vhidhiyo uye odhiyo webhu zvemukati. Mune mamwe mazwi, isu tinobatsira kuumba uyezve kugadzira uye nekuparadzira meseji yako.
Miami musika unonakidza uyo, mune dzimwe nzira, unogara uchiratidzika kunge uri kumashure kusara kwenyika. Ndataura izvozvo, ndinoshamisika kuti "iyo nyika yese" iripi maererano nemakambani anotarisa kunze kweSM rubatsiro.
Gumiguru 22, 2008 pa 9:11 AM
Ini ndinoda zano reruwa dhairekitori. Heano mamwe matunhu akanzwa fomu; miami, FL.